सूचना प्रविधिमा एफडीआई ल्याउन सके बाहिरिएको जनशक्ति फर्किनेछ «
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको अढाइ दशक लामो इतिहासमा पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट उम्मेदवारी दिएर अध्यक्षमा निर्वाचित नवराज कुँवर जुझारु व्यवसायी मानिन्छन् । वि.सं २०५२ देखि क्यानको सदस्य रहेका कुँवरले २०५७ सालमा लुम्बिनी अञ्चलका सूचना प्रविधि व्यवसायीलाई संगठित गरी आफ्नो अध्यक्षतामा क्यान लुम्बिनी संस्था गठन गरी क्यानको पहिलो शाखाका रूपमा सदस्यता लिएका थिए । पछिल्लो डेढ दशकदेखि क्यानको केन्द्रीय समितिमा रहेका कुँवर संस्थामा अनुभवी नेतृत्वका रूपमा चिनिन्छन् । यसअघिको कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका कुँवर गत मंसिर ७ मा भएको क्यान महासंघको १३औं कार्यसमितिको निर्वाचनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा क्यान महासंघ पु-याउने एजेण्डासहित क्यान नेतृत्वमा चुनिएका कुँवर हाल क्यानको पहिचान बनेको इन्फोटेकको अन्तिम तयारीमा छन् । योसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच पु-याउन अभियान सञ्चालन गर्ने र संस्थागत सुशासन विकासमा जोड दिँदै सूचना प्रविधिको विकासलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने बताउँदै आएका छन् । उनै अध्यक्ष कुँवरसँग सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणा, फागुन पहिलो साता हुन लागेको इन्फोटेकको तयारी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालगायत समसामयिक विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
क्यान महासंघ र इन्फोटेक एक–अर्काका परिपूरक जस्तै भइसकेका छन् । यस वर्ष हुन लागेको क्यान इन्फोटेक–२०२० को तयारी कस्तो हुँदैछ ?
मुलुककै ठूलो सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रदर्शनी क्यान इन्फोटेक–२०२० को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र मनोरञ्जनसम्बन्धी प्रदर्शनी तथा सम्मेलनको यो २६औं संस्करण हो । आगामी फागुनको २ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ । ८० प्रतिशत स्टल बुकिङ भइसकेका छन् । यस पटकको क्यान इन्फोटेकको विशेषता इन्नोभेसन एक्स्पोजर रहनेछ । यसअन्तर्गत स्टार्टअप र इन्नोभेसनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना नयाँ प्रडक्टहरू र आइडियाको प्रदर्शनी गर्नेछन् । यसका निम्ति सार्वजनिक सूचना निकालेरै स्टार्टअप र इन्नोभेसनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सहभागी हुन आह्वान गरिसकेका छौँ । सहभागीहरूलाई क्यान इन्फोटेकमा विभिन्न सुविधा तथा उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकिएको छ । प्रविधिका क्षेत्रमा भएका नयाँ तथा इन्नोभेटिभ आइडियाहरूको प्रवद्र्धन गर्ने आफ्नो योजनाअनुरूप क्यान महासंघले इन्नोभेसन एक्स्पोजरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो । सूचनाप्रविधि तथा इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूको क्षमता विकास गर्नु, उनीहरूको आइडियालाई प्लाटफर्म प्रदान गर्नु, इन्नोभेटिभ आइडियालाई व्यवसायमा बदल्न मद्दत गर्नु र व्यवहार उपयोगी शिक्षामा योगदान गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । इन्फोटेकमा स्टार्टअप आइडिया तथा प्रोजेक्ट प्रतिस्पर्धा र जुनियर इन्नोभेटरको प्रदर्शनीका साथै रोबोवार्स, अक्वाबोट, पुसबोट, ड्रोन डान्सिङ र रोबोट रेसजस्ता प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गरिनेछ, जसमा हरेक प्रतिस्पर्धाका विजेताले आकर्षक पुरस्कार पाउनेछन् । यसका लागि बेग्लै विशेष पेभिलियनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदर्शनीको उद्घाटन रोबोट र ड्रोनबाट गरिनेछ । इन्फोटेकलाई नयाँपन दिन फरक शैली अपनाएका छौँ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी संस्था क्यान महासंघ भए पनि कार्यसमितिमै धु्रवीकरण हुँदा समग्र क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिनबाट चुक्यो भनिन्छ नि ?
क्यान महासंघ मात्रै नभएर संघसंस्था अरू जुनसुकै होस्, केही चर्चा–परिचर्चा हुन थालेपछि नै अरूको चासो बढ्न थाल्छ । समाजमा जुन संस्था अलि अगाडि बढ्छ र प्रभाव जमाउन थाल्छ अवश्य पनि आकांक्षीहरू बढ्छन् । जब आकांक्षा बढ्दै जान्छ त्यस्तो संस्थामा सर्वसम्मतभन्दा निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व छानिन्छ । ठूलो संस्थामा केही धु्रवीकरणजस्तो देखिनुलाई सामान्य रूपमै लिनुपर्छ । क्यान महासंघको २६ वर्षको इतिहासमा मेरो पालामा सबैभन्दा टप किसिमको निर्वाचन भयो । चुनाव भएपछि एउटाले हार्ने एउटाले जित्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । हार्ने पक्ष केवल चुनाव मात्रै हारेको हो, समग्र क्षेत्रबाटै बाहिरको भन्ने होइन । दुवै पक्ष मिलेर जान सकियो भने मात्रै समग्र आईटी क्षेत्रको विकासमा टेवा दिन सकिन्छ । चुनाव सकियो अब हामी सबै साथीभाइ नै हो कुनै न कुनै ठाउँमा हामी एकअर्कामा ठोक्निुपर्ने अवस्था छ । एकले अर्काेलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, दुवै पक्षलाई मिलाएर जानुपर्छ भनेर मेरो विपक्षबाट उठेको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष मनोनीत गरेको छु । अरूलाई पनि विभिन्न ठाउँमा राखेर सक्दो ब्यालेन्स गरेर जाने कोसिस गरेको छु । क्यान महासंघलाई व्यावसायिक बनाउँदै सफल बनाउने जिम्मेवारी ममाथि आएको छ । मेरो कार्यकालमा सबै पक्षलाई मिलाएर अवसर र चुनौती दुवैतर्फ साझेदारी हुनेछ ।
अर्कातर्फ मेरो कार्यकालमा महिला सहभागिता पनि बढेको छ । काम गर्ने र नेतृत्व लिने आकांक्षा स्वयं व्यक्तिमा हुनु जरुरी छ । अहिलेको टिममा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहितका साथीहरू आउनुभएको छ । क्यानमा महिला सहभागिता कम भएकाले उहाँहरूको सहभागिता बढाउन थप प्लेटफर्महरू खडा गर्ने काम भएको छ । उहाँहरूलाई नेतृत्व दिन खोजेको छु । निर्वाचित भएर आएपछि काठमाडौंबाहिर ८ वटा ठाउँमा इन्फोटेक सम्पन्न भएको छ । ९ वटा इन्फोटेकलाई हेर्दा निकै तीव्र रूपमा काम गर्र्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक छलफल कम भएको छ । राजधानीको इन्फोटेक सकिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य रूपम समेट्न छुटेका विषयलाई सम्बोधन हुन्छ ।
तपाईंले नेतृत्व लिएपछि इन्फोटेकबाहेक अरू कामहरू कुन–कुन अगाडि बढाउनुभयो ? दुईवर्षे कार्यकालमा यो क्षेत्रले के नयाँ अनुभव गर्न पाउँछ ?
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने धेरै छ । अहिलेको अवस्थामा क्यान महासंघ मात्रै नभएर देशले नै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च स्थान दिएको छ । परिवर्तनको पहिलो सुरुवात भनेको नै सूचना र प्रविधिबाट हो । जहाँबाट हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने काम त अवश्य गुर्नपर्छ । निजी क्षेत्रबाट क्यान महासंघ लिडिङ रोलमा छ, त्यसैले हामीमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ । सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि बढाएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । यो फ्रेमवर्क डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, सार्वजनिक सेवासुविधा सहजै उपलब्ध गराउन तथा प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन लागत कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तथ्यांकको उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको लागत कम गरी पहँुच सुनिश्चित गरी नीतिगत तथा प्रणालीगत स्थिरता कायम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी ८ वटा क्षेत्र छानिएका छन् । ८ वटै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नेपाललाई आर्थिक सामाजिक प्रगतितर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यका साथ ८० वटा डिजिटल पहलसहितको कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । यो लगायत क्यान महासंघले हिजोका दिनमा अगाडि सारेका कामहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । सरकारले भिजिट नेपाल २०२० मनाइरहँदा त्यसका सहयोगी हामी हुनुपर्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर पर्यटन र आईटीलाई मिलाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने तयारीमा छौँ ।
अर्कातर्फ इन्फोटेकलाई पनि फरक तरिकाले लैजानुपर्छ भनेर यस पटकदेखि केही नयाँपन दिन पहल गरेका छौँ । विश्वबजारमा भएका प्रविधि मात्रै नभएर नेपालमा भएका प्रविधिलाई पनि समावेश गराउनुपर्छ भनेर इन्जिनियरिङ कलेजहरूबाट उत्पादन भएका उत्पादनलाई छुट्टै प्याभिलियन मार्फत प्रदर्शन गरिनेछ । विदेशी सामग्री मात्रै नभएर नेपालमै उत्पादन भएका नयाँ इनोभनेस, स्टार्टअपलाई प्रदर्शन गर्ने प्लेटफर्म इन्फोटेक बन्न सक्छ । कलेज तथा विद्यार्थीसँग सहकार्य गरेर नेपालमै भएका कामहरूलाई पनि प्रदर्शन गर्न हामीले पहल गरेका छौँ । विगतमा इन्फोटेकमा विदेशमा भएका प्रविधिलाई भिœयाइन्थ्यो भने यसपटक नेपालमै उत्पादन भएका सामग्री, इन्नोभेस, स्टार्टअपलाई समावेश गरिएको छ । यसले गर्दा विगतभन्दा केही नयाँपन इन्फोटेकमा अवलोकनकर्ताले पाउनेछन् । कम्तीमा २०-२२ वटा कलेजहरूका उत्पादनहरू इन्फोटेकमा समावेश हुन्छन् ।
क्यान महासंघ सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने संस्था भए पनि आयातित सामान बेच्ने व्यवसायीहरूको संस्था जस्तो भयो । रिसर्चतर्फ पनि ध्यान दिने बेला भएन ?
क्यान महासंघको अवधारणमा अगाडि बढेको संस्था हो । प्रविधिका क्षेत्रमा अरू संस्थाहरू पनि खुलिसकेका छन् । ती संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व क्यानले गर्छ । हिजोका दिनमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्यान मात्रै रहेको जस्तो थियो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । त्यतिबेला क्यान महासंघले गरेका ससाना कामहरू पनि देखिन्थे । अहिले क्यान महासंघमा परिणत हुनु भनेको क्षेत्रगत रूपमा रहेका सबै संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्ने हो । क्यान महासंघ नेपालभर फैलिएको छ । अहिलेकै दिनमा हामी ५७ जिल्लामा शाखा कार्यालय विस्तार गरेका छौँ भने प्रदेश कार्यालयहरू पनि स्थापना भइसकेका छन् । क्यानले गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन । नीतिगत रूपमा हुने लबिङ गर्ने, दबाब दिने, सुझाव दिने काम महासंघले गर्दै आएको छ । सूचना प्रविधि बिल, डिजिटल नेपाल अवधारणा, ब्रोडब्यान्ड नीतिलगायत सबैमा क्यान महासंघ संलग्न छ । सरकारलाई दिनुपर्ने सुझावमा क्यान महासंघले दिएको छ । सरकारले पनि हामीले दिएका सुझावहरू समावेश गरेको छ । राजनीतिक कुरा जस्तो हामीले यो ग-यौं त्यो ग-यौं भन्नु भन्दा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका काममा उपभोक्तालाई रुचि छ, त्यसैले जनमानसमा छिटो पुग्छ । हाम्रो पालामा पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर यो क्षेत्रको विकास लागि पहल गर्नेछौं । एकातर्फ सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्छौँ भने अर्कातर्फ हाम्रा अन्य काममा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ । यस क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा बुँदागत रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । हिजोको अवस्था, वर्तमान अवस्था र भोलिका दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने मार्ग प्रस्तुत गरेका छौँ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई जुन तरिकाले अगाडि बढाउन खोजेको छ त्यसमा हामीले दिएका सुझावहरू अवश्य पनि समावेश हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
क्यान महासंघमा विभिन्न खालका व्यक्ति, उद्योगी, संस्था सदस्य छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनचेतना बढाउने काममा महासंघ सक्रिय छ । भौगोलिक रूपमा विविधता भएको देशजस्तै प्रविधिमा पनि विविधता छ । युवापुस्ता फाइभजी तर्फ आकर्षित भइरहेको अवस्था उमेर ढल्केका सर्वसाधारणमा फोन राम्रोसँग चलाउन नसक्ने अवस्था छ । सूचनामा पहुँच हुने र नहुने बीचको ग्यापलाई कम गर्नुपर्छ भनेर क्यान महासंघ लागिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा हो त्यसका निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा सूचना प्रविधिलाई समावेश गराउनुपर्छ । हामीले कुनै पनि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु विशेष कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । सूचना प्रविधिको पहुँच तल्लो तहसम्म पु-याउनका लागि विशेष किसिमको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकार मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अभियानको रूपमा जान सकियो भने २-४ वर्षमा एउटा लेभलमा पु-याउन सकिन्छ तव मात्रै डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सकिन्छ । हामीले तीनै तहका सरकारलाई यस सम्बन्धमा सुझाव दिइसकेका छौँ ।
सरकारकारलाई सुझाव दिने मात्रै हो कि तपाईंहरूका तर्फबाट पनि केही काम हुन्छ ?
निजी क्षेत्रले सरकारकारलाई सुझाव दिने हो भने सरकारले जारी गरेका ऐन–नियमको कार्यान्वयमा सहयोग गर्ने हो । आफ्नो क्षेत्रबाट प्रविधिको विकास र पहुँच बढाउन गर्नुपर्ने काम हामीले गर्दै आएका छौँ । मेरो कार्यकालमा पनि तल्लो तहसम्म कसरी सूचना प्रविधिको पहुँच पु-याउन सकिन्छ भनेर विशेष छलफल भएको छ । क्षेत्रगत रूपमा रिसर्च गर्न छलफल भएको छ । हामीले अलि ब्रोड रूपमा रिसर्च गर्न खोजेका छौँ तर सरकारसँग नै डेटा नभएको अवस्थामा कत्तिको रियालिटीसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने हो । यस क्षेत्रमा डेटाको अभाव महसुस गरेर रिसर्चको काम सुरु गरेका छौँ । क्यान महासंघले गर्ने सचेतना, प्रविधिको प्रवद्र्धन, इन्फोटेकजस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपाल गुणस्तरहीन सामग्रीको ‘डम्पिङ कन्ट्री’ हुन लागिसकेको भन्ने गरिन्छ, के नेपाल साँच्चै डम्पिङ हुँदै गएको हो ?
हार्डवेयरका क्षेत्रमा नेपालमा केही पनि उत्पादन छैन त्यसका लागि आयातमा भर पर्नुको विकल्प छैन । नागरिकको क्रयशक्ति कति छ भन्नेमा अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । कतिपय सामान बन्दा ‘ओन्ली फर नेपाल’ भनेर ट्याग लगाएको पनि देखेका छौँ । जुन कुरा हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौं तबसम्म यस्तो अवस्था आइरहन्छ । सफ्टवेयरको क्षेत्रमा भने नेपालले अलिकति फड्को मार्न खोजेको छ । नेपालमा उत्पादन भएका सफ्टवेयरहरू विदेशमा निर्यात भएका छन् । मोबाइल र ब्रोडब्यान्ड बाहेक अन्य क्षेत्रमा नेपालले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । अन्य क्षेत्रहरू खासै विकास हुन सकेका छैनन् । जबसम्म हामीले आफ्नो उत्पादन गर्न सक्दैनौं तबसम्म डम्पिङ नै भए पनि आयात गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपाललाई सफ्टवेयर र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) को हब बनाउने भनेर पनि क्यान महासंघको अघिल्लो नेतृत्वले पहल गरेको थियो । तपार्इंले यस मुद्दालाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले यसमा पहल गरेका छौँ । कानुन बनाउने ठाउँमा पनि यस क्षेत्रको सम्भावनासहितको खाका प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । नेपालले सूचना प्रविधिमा फड्को मार्न सक्ने भनेको सफ्टवेयर र बीपीओ नै हो । कानुन बनाउने ठाउँमा सूचना प्रविधि बुझेको व्यक्ति पुग्न सकेमा मात्रै यस क्षेत्रको न्याय हुन्छ । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन हुन चाहँदैन यसले अप्ठेरो गरेको छ । कानुन बनाउने ठाउँमा प्रविधि बुझेका व्यक्ति राख्नुपर्छ भनेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । हामीले नीति बनाउन पनि सक्दैनौँ, कसैलाई दण्ड–जरिवाना पनि गर्न सक्दैनौँ सबै काम सरकारले गर्ने हो । हाम्रो आवाज दिने बाटो देखाउने, ज्ञान दिने हो ।
काठमाडौंकै कुरा गर्दा अहिले पनि हरेक १० घरमा सानो होस् या ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी छ । त्यसलाई बाहिर ल्याउने वातावरण सरकारले गराउनुपर्छ । राम्रा कुरालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारलाई चाहिएको सफ्टवेयर चाहिएको छ त्यसलाई विदेशबाट किन्ने नभएर बरु लगानी गरेर भए पनि नेपाली कम्पनीलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधिमा उच्चतम सम्भावना भए पनि विदेशी लगानी आउन नसक्नुको कारण के हो ?
विदेशी कम्पनीलाई नेपाल ल्याउन सकियो भने जति पनि जनशक्ति बाहिरिएको छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहानेलाई एउटा समयसीमा तय गरेर उसलाई दिनुपर्ने सुविधा छुट स्पष्ट पार्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँदा लाभको अपेक्षाले आउने हो । हामीले कुनै सुविधा र सुरक्षा नदिई विदेशी लगानी आउँदैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ त्यसमा धेरै कम्पनी आउन इच्छुक पनि छन् । विदेशी कम्पनी आउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।
#कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघ